မြန်မာ WordPress လုပ်လိုသူများအတွက် | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Calling Ads for ExtMgz
Salute to the Greatest Leader of Burma →
February 12, 2008 · 12:06 am
မြန်မာ WordPress လုပ်လိုသူများအတွက်
စပ်မိစပ်ရာက ကိုသင်္ကြန်တို့ ဦးဆောင်ပြီးတော့ mmWordpress.com ဆိုပြီးတော့ လုပ်နေပါပြီ။ တချို့လည်း သိပြီးကြပါပြီ။ WordPress ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ၊ WordPress လုပ်နည်းတွေ ဘာကွာလဲ လာလာမေးကြသူတွေကို ညွှန်းပါရစေ။ WordPressing နဲ့ ပတ်သက်လို့ တဖြည်းဖြည်း စုဆောင်းဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်။ သိလိုတာတွေကိုမေးဖို့ စီဘောက်စ်လည်း ဖွင့်ထားပါပြီ။ WordPress Blogging (or) WordPressing လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ၊ Blogspot ကနေ WordPress ပြောင်းချင်သူတွေ၊ WordPress ကို ကလိကြည့်ချင်သူတွေအတွက်တော့ တံခါးပွင့်သွားတာပေါ့။ WordPress အကြောင်း တစိုက်မတ်မတ်ရေးပေးနေတဲ့ မှော်ဆရာအပြင် လေ့လာစရာ၊ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးစရာ နေရာတစ်ခုတိုးလာတာ အားရစရာပေါ့ဗျာ။
ဒီမှာ Click ပါ။ သို့မဟုတ် http://www.mmwordpress.com
Tagged as IT & Blogging, Wordpress
2 responses to “မြန်မာ WordPress လုပ်လိုသူများအတွက်”
hello bro, i can’t download . pls help me.
hello bro, i can’t download this wordpress ebook. pls help me. i urgently need it.